विमानस्थलमा उडानसम्बन्धी जानकारी दिने डिस्प्लेमा अश्लील सामग्री प्रसारण भएपछि…. « Janata Times
विमानस्थलमा उडानसम्बन्धी जानकारी दिने डिस्प्लेमा अश्लील सामग्री प्रसारण भएपछि….
काठमाडौं, १४ जेठ । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा रहेको एउटा एयरपोर्टमा एउटा लाजमर्दो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यात्रुको सुविधाका लागि राखिएका इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेहरूमा विज्ञापन र उडानसम्बन्धी जानकारीको सट्टा अश्लील सामग्री प्रसारण भएको छ । ब्राजिलको एयरपोर्ट प्राधिकरण इन्फ्रारोले यस विषयमा संघीय प्रहरीलाई रिपोर्ट गरेको छ ।
सान्तोस डुमोन्ट एयरपोर्टमा अश्लील प्रदर्शनले धेरै यात्रुहरूलाई असहज बनाएको थियो । दृश्यका कारण धेरै मानिसहरू छक्क परेका थिए भने केहीले आफ्ना बच्चाहरूलाई वयस्क सामग्री हेर्नबाट जोगाउन व्यस्त थिए । घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका केही भिडियो क्लिपमा मानिसहरु हाँसेको पनि देख्न सकिन्छ ।
विज्ञानपन कम्पनीको लापरबाहीले त्यस्ता घटना भएको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ । ह्याक गरिएका स्क्रिनहरूबारे विमानस्थल प्राधिकरणले अनुसन्धान गरेको छ । ‘हामी जोड दिन्छौं कि हाम्रो मिडिया स्क्रिनमा देखाइने सामग्री विज्ञापन अधिकार भएका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी हो’, इन्फ्रारोले भनेको छ । सूचना सेवाहरू अर्को कम्पनीलाई आउटसोर्स गरिएको विमानस्थल प्राधिकरणले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ । (एजेन्सी
१६५ यात्रु सवार डुंगामा आगलागी
मनिला, असार १३ । मध्यफिलिपिन्समा १६५ यात्रु सवार एउटा डुंगामा आगलागी भएको र उद्धारकर्ताहरूले अहिले
ओली–प्रचण्डसँग चिनियाँ राष्ट्रपती सीका दूतको छुट्टाछुट्टै बार्ता, यस्तो छ निश्कर्ष
काठमाडौं, असार १२ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालका दुई ठूला
गर्भपतन कानुनको शिकार हुने यी हुन् विश्वका चर्चित ६ महिला
एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक फैसलामा महिलाको गर्भपतन गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई खारेज गरेको
न्युयोर्क, १२ असार । चन्द्रमा, सूर्य र हाम्रो सौर्यमन्डल कसरी बन्यो भन्ने अध्ययन गर्न धेरै
नासाले फिर्ता माग्यो चन्द्रमाको माटो र साङ्ला
बोस्टन, असार १२ । राष्ट्रिय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चन्द्रमाको
८० वर्षपछि प्रशान्त महासागरमा फेला पर्यो दोस्रो विश्वयुद्धकाे समयमा डुबेको पनडुब्बी
न्युयोर्क, ११ असार । दोस्रो विश्वयुद्ध ताका डुबेको अमेरिकी नौसेनाको पनडुब्बी भग्नावशेषसहित समुद्रमुनि फेला परेको
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो आदेश के हो ?
अमेरिका, असार ११ । गर्भपतनसम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै अमेरिकाका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन